Ọrụ nhazi ọrụ ihe nkedo nke OEM ODM rụpụta na ụlọ ọrụ | ỊZỤLI-Elec
Nchịkọta nke njikọ njikọta nke nhazi ígwè
Bolt na -ejikọ maka nhazi nchara bụ ụzọ njikọ nke na -ejikọ ihe karịrị akụkụ abụọ nke ihe nchara ma ọ bụ ihe n'ime otu. Njikọ Bolt bụ ụzọ njikọ kachasị mfe na nchịkọta ọgbakọ na nrụnye nhazi.
Njikọ njikọta bụ nke izizi ejiri rụọ nrụnye igwe. N'ọgwụgwụ afọ 1930, ejiri njikọ rivet dochie njikọ bolt, nke ejiri ya mee ihe naanị ka ọ bụrụ ihe nrụzi nwa oge na mgbakọ ihe. Usoro njikọ njikọ mkpọchi siri ike pụtara na 1950s. A na -eji bọmbụ carbon siri ike ma ọ bụ nchara carbon alloy mee ya, ike ha dịkwa okpukpu 2 ~ 3 karịa nke mkpọchi nkịtị. Njikọ njikọ bolt dị elu nwere uru nke owuwu dị mma, nchekwa na ntụkwasị obi. E tinyela ya n'ọrụ n'ichepụta na ịwụnye ihe owuwu nchara na ụfọdụ osisi igwe kemgbe 1960.
Nkọwapụta nke bolts
Nkọwa nkọwa nke a na -ejikarị arụ ọrụ nchara gụnyere M12, M16, M20, M24 na M30. M bụ akara mkpọchi na ọnụọgụ bụ dayameta ọnụ.
A na -ekewa mkpọchi na akara iri dị ka akara arụmọrụ si dị: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 na 12.9. Ihe mkpuchi dị elu ọkwa 8.8 bụ nke nchara-carbon alloy steel ma ọ bụ nchara carbon nchara, a na-akpọkwa ya ihe mgbachi dị elu mgbe ọgwụgwọ ọkụ (imebi na iwe ọkụ), na mkpọchi n'okpuru ọkwa 8.8 (ewezuga ọkwa 8.8, mkpọchi nkịtị a nụchara anụcha na-agụnyekwa. ọkwa 8.8) na -akpọkarị mkpọchi nkịtị. Tebụl na -esote na -egosi ọkwa arụmọrụ yana akụrụngwa nke bolts.
Nke gara aga: Ọrụ na -akwado maka ụdị ngwa ọ bụla
Osote: All usoro nke ịghasa customization
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Aluminum CNC Machined Parts, Mmiri Efere, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ọnwụ nkedo Magnesium, Ihe nkedo, Ngwaahịa niile